umshini wokuthengisa i-pellet uyathengiswa,ukuthekelisa eNingizimu Afrika,E-Australia,India,Phillippines
Amandla:11kw,isigaba esisodwa noma izigaba ezintathu
Ikhono:300~ 500kg / h
Ama-Pellet Make Machines aboniswa ngesakhiwo se-compact, ukugijima okuqhubekayo, kanye nokusebenza kahle kakhulu. Umhlangano we-roller-die wamukelwa ngensimbi ye-alloy ukuze uqinise ukuqina kwawo futhi usetshenziswe imishini isikhathi eside. Lapho ukhiqiza ama-pellets ngeKingman pellet mill, uzophumula uqinisekise ukuthi ukukhiqizwa okutholwe ngompetha bethu be-pellet kungaphezu kokulindele okwamanje ngamandla amancane. Umshini wethu wokwenza i-pellet nawo ungasebenza 24/7 per day.we bangama-pellet abathembekile enza imishini yokuhlinzeka nge-CE ne-ISO 9000 izitifiketi.
umswakama wokusetshenziswa okungavuthiwe ungaphansi kweleveli kazwelonke ka-15% .Umqhubi ohlanganyelwe nowokuhlangana jikelele uthathwa.ukuphiswa kwepellet kagesi kungaqhutshwa ngemoto kagesi noma ngenjini yedizili.ukusebenzisa ubuchwepheshe obuhlukile kungaqedela yonke inqubo yokuphansi -Impisi yomisa, ukupholisa nokuhlola endaweni eyodwa. Imiphumela ikhombisa ukuthi umshini wokwenza isilwane wokuphakela isilwane usetshenziswa kakhulu ekusetshenzisweni komshini wokwenza idada okuphakelayo kwezilwane ezifuyweni, Umshini wokudla we-pellet wezilwane uwukukhetha okuhle kokwenza ukudla kwezilwane njengokudla kwedada, ukudla kwenkukhu,ukudliwa kwezinhlanzi nokunye .Inqubo le ilula ukusebenza futhi iphansi ngezindleko eziphakeme zokusinda kwe-biomass microorganism bacterium >90%.
Izinzuzo zemishini yokwenza i-pellet
Izinga lokupheliswa komshini wethu wokwenza okuphakelayo okuphakelayo ngaphezu kwe- 95%.
Amapensela akhiqizwa awokuqina okuhle nesimo,elula ukuyigcina.
Amapelethi awusayizi ofanayo, indawo ethelayo kepha ngenani eliphakeme kakhulu.
Ukwenza i-Pellet kuyindawo eshisayo emhlabeni wamanje wokuhlunga we-biomass. Njengoba intengo yamalahle ne-uwoyela iya ngokuya ikhuphuka futhi kugcinwa khona lags ezimbili ngemuva kwentuthuko kanye nezidingo zikagesi, Ama-pellets we-biomass njengomthombo wamandla aluhlaza athuthukiswa ngokushesha. Ngenxa yobubanzi obubanzi bohlelo lokusebenza lwezinto ezingavuthiwe, pellets zingenziwa kalula ngezindleko eziphansi.
Yiziphi Izinto Zokusebenza Zingathengiswa Ngumshini WePellet Ukwenza Umshini?
Cishe yonke imfucumfucu yamahlathi nokugcwala i-agro-imvelo ingenziwa emapelletini ngomshini wethu wokwenza ama-pellet, njenge: Ama-Chip Chip, Ukushefa, Sawdust, IGoldnutnut-igobolondo, Ama-Biogases weShukela, Amagobolondo Caster / Isiqu, I-coffee Husk, Paddy Straw, Isiqu seLanga, Ukotini Stalks, Imfucumfucu Yogwayi, Isiqu sesinaphi, Ukungcola Kwe-Jute, Uthuli lweM bamboo, Ukungcola Tea, Isigaxa Samagundane, Ukhumbule uPalm, Soybeans Khumbula, I-Coir Pitch Bark / Straws, Amarayisi Amalunga njll. Ama-pellets wokugcina angasetshenziselwa ama-boilers wezimboni nezitshalo ezinkulu zamandla kanye nokushisa kwasekhaya noma ukufuya izinkukhu
Ukusetshenziswa komshini wokuphamba wepellet wezilwane
Umshini wokwenza okuphakelayo kwezilwane ulungele ukucubungula izinhlobo ezahlukahlukene zokusanhlamvu okuqinile zibe izipele ezincane zokuphakela izinkukhu njengenkukhu, idada, goose, izigwaca nemfuyo kubandakanya nezinkomo, inkomo, unogwaja, ingulube, njll.
★ Izinto zokusetshenziswa kulula ukuzithola, njengembila, ummbila, ukolweni bran, irayisi, ubhontshisi, njll.
★ Umshini wokuphaka izinkukhu kagesi uthandwayo uyathandwa, ipulazi lokufuya, nepulazi lezinkukhu.
Ipharamitha yobuchwepheshe bemishini yokwenza i-pellet
Ividiyo yomshini wokwenza i-pellet